Ukwelapha kanye ne-prophylactic institution No. 147 eMoscow kuyinkampani yezokwelapha yombuso ehlinzeka ngezinsizakalo kumaMuscovites afakwe kwi-polyclinic. Muva nje, isakhiwo salesi sikhungo senze izinguquko: igama liye lashintsha, ukulungiswa kabusha kwenzeka. Namuhla sithola ukuthi i-polyclinic 147 iyini, njengoba ibizwa manje. Futhi thola ukuthi iziguli zicabanga ngani odokotela, futhi ngokujwayelekile mayelana nokwelashwa kulesi sikhungo.
ГБУЗ ГП № 195 ДЗМ: ukucacisa
Lesi sichazamazwi sisho lokhu okulandelayo: Isikhungo sokunakekelwa kwempilo sesabelomali sikahulumeni "I-City Polyclinic No. 195 yoMnyango Wezempilo eMoscow". Le nhlangano yasungulwa ukuze inikeze ukunakekelwa kwezempilo okuyinhloko ezikhungweni zeziguli kanye nezilungiselelo zesibhedlela zasemini.
Lesi sikhungo sinamagatsha angu-5:
1. Igatsha lokuqala likhona: pos. Rublyovo, I-Soviet, 2.
2. Indawo yegatsha lesibili: isib. Malogvardeyskaya, 40, ukwakha 1.
3. Igatsha lesithathu litholakala ku: ul. Malogvardeyskaya, 20, ukwakha 1.
4. Indawo yegatsha lesine: isib. UMarshal Nedelina, 2.
5. Igatsha lesihlanu litholakala: iFlovskyky boulevard, 18.
Abantu abadala bakusizwa kuyo yonke iminyango. Izingane ezineminyaka engaphansi kwengu-15 zitholwa emagatsheni ngaphansi kwezinombolo 1 no-5. Ukubonisana kwabesifazane kutholakala emnyangweni owodwa kuphela ku: ul. Malogvardeyskaya, 40, ukwakha 1.
Izinguquko emthethweni wezokwelapha
Ngomhla ka-5.05.2012 ngomyalelo weMnyango wezeMpilo waseMoscow (Order No. 378), i-polyclinic 147 ye-city yahlelwa kabusha kwi-GPHU GP No. 195 DZM, igatsha No. 2. Njengoba abantu abakhuluma ulimi oludala basakhuluma igama elidala, lesi sihloko sinalo igama elifanayo. Kodwa zonke iziguli ezifanayo kufanele zikwazi ukuthi namuhla i-polyclinic eMalogvardeiskaya Street isivele iqanjwe kabusha.
Izindlela zokubhalela udokotela
Ngokushaya ucingo kwisikhungo socingo se-City: 8 (495) 539-30-00.
Ukuziqopha kudokotela ngolwazi (terminals electronic) kufakwe emahholo we-polyclinic.
Ngokubiza inombolo yobhaliso yesikhungo 8 (495) 413-27-84.
Ukuziqopha udokotela nge-intanethi.
Isikhalo somuntu siqu ebhalweni.
Incazelo emfushane yomnyango № 2
I-Polyclinic 147 (manje lo mnyango No. 2 GP No. 195) ukhona emgwaqeni. Malogvardeyskaya, hhayi kude nokuvula emgwaqweni. I-Partisan.
Kulesi sikhungo abantu abafinyelele eminyakeni engu-15 futhi abahlala esifundeni saseKuntsevo bakhonzwa.
Ukwamukelwa emtholampilo kuqhutshwa ngabahlengikazi besifunda, kanye nochwepheshe bezindawo ezincane.
Lesi sikhungo sisebenza isikhungo semithi ekhemisi, lapho abantu bengathola khona imithi esaphulelo (uhlelo lokuhlinzekwa okukhethayo kumaqembu asengozini emphakathini wabantu).
Ul. Molodogvardeyskaya, 40, polyclinic: odokotela, amahhovisi egatsha № 2
Ochwepheshe abalandelayo basebenza kule sikhungo:
- Udokotela ohlinzayo;
Futhi lapha ungenza lokhu okulandelayo:
- Ukuhlolwa kwegazi kusuka emunwe, umuthi.
Ngisho nakule mtholampilo ungenza i-aphoyintimenti yokumisa umzimba, ukuvivinya umzimba, ukushisa kanye ne-electrotherapy. Ukugonywa kweziguli kwenziwa.
Esikhungweni esinjenge-polyclinic engu-147 eMalogvardeiskaya Street, akuzona zonke izinsizakalo zezokwelapha ezinikezwa mahhala. Izikhombisi-ndlela ezilandelayo zokwelapha zakha izindleko zabo siqu:
- Ukuxilongwa kwezidakamizwa.
- Ukuhlolwa kwe-Prophylactic.
- I-Gynecology (ukufakwa kanye nokususwa kuphela kwe-spirrauterine yemiklamo ekhokhwa kulesi sigaba).
I-Polyclinic emgwaqweni waseMlodogvardeyskaya ihlola abantu banomqondo omuhle futhi omubi. Ukubuyekezwa okungahle kwenzeke kushiywe ngabantu abathandayo ukuthi bahola kanjani udokotela. Futhi kuthinta iqiniso lokuthi i-polyclinic yalungisa. Kodwa-ke, abantu abaningi abathandi ukuthi labo ochwepheshe bavumeleke ukuba bafinyelele isikhathi sokuqokwa, ukukhuluma efonini ngenkathi isiguli sithathwa. Nakuba, ngakolunye uhlangothi, abantu abathanda lo mtholampilo bayasimela, beqaphela ukuthi odokotela abasoze baqeda ukwamukela kuze kube yilapho umuntu wokugcina ekhonzwa. Kungakhathaliseki ukuthi bakhuluma isikhathi esingakanani, abaphazamiseki, kodwa zonke iziguli zadedelwa ngokuqokwa.
Ngokuvamile, bangaki abantu, imibono eminingi kangaka. Ezinye iziguli ezinjenge-polyclinic 147 eMoscow, abanye ngeke baphumelele emngceleni walesi sikhungo. Kungakhathaliseki ukuthi abantu bathini, akufanelekile ukwakha imibono kwabanye imibono yabantu. Kudingekile ukuzama ukucela usizo futhi ngemuva kwalokho kuphela ukudweba iziphetho zabo.
Ukusiza isigamu esihle sabantu
Ukubonisana kwabesifazane kule polyclinic 147 kunikeza uhla olugcwele lwezinsizakalo ngokwezindlela zokuvimbela izifo nezinkinga zokubeletha. Lesi sikhungo senza umsebenzi wokubonisana, wokuxilonga, wezokwelapha nokuvimbela. Ekubonisaneni kwabesifazane, banganikeza kokubili ukunakekelwa okwelashwa (okulondolozayo) nokunakekelwa kokuhlinzwa. Ababelethayo kule mtholampilo bangakhipha noma basuse i-intrauterine idivaysi, benze ukukhipha isisu amasonto angama-5.
Futhi, ochwepheshe balinga ukuhlolwa, okuyinto ithunyelwa ebhokisatriyori enkulu, esesakhiweni esifanayo.
Ukubuyekezwa okunempilo kweziguli mayelana nokubonisana kwabesifazane
Amantombazane, abesifazane ngokuhlukile babona umsebenzi walesi sikhungo. Ezinye iziguli zikholelwa ukuthi ochwepheshe basebenza lapha, kuyilapho abanye bengavumelani nalokhu.
Labo abathanda i-polyclinic 147, kanye nokubonisana kwabesifazane ngokuqondile, bhala amaphuzu afanelekayo:
- Ukucabangela, ukuhlonipha odokotela. Izazi ze-gynecologists zihlola ngokucophelela, zibonisane ngazo zonke izinkinga, zibeke ukuxilongwa okufanele, zinikeze ukwelashwa okufanele. Ababhali izivivinyo ezingadingekile.
- Isevisi yamahhala. Ngokungafani namahhovisi ezizimele, izigciwane zezinzwa lapha zivivinywa ngokungenabugovu. Ngisho nezembozo zezicathulo zinikezwa mahhala. Futhi akukho nhlobo isifumbathiso lapha.
Ukuphendula okungahambisani neziguli zesifazane mayelana nokubonisana kwabesifazane
Ukubuyekeza okungalungile ku-inthanethi ngaphezulu. Ngakho-ke, abesifazane abaningi abanelisekile ngamaphuzu alandelayo emsebenzini wokubonisana kwabesifazane:
- Akunakwenzeka ukuphumelela. Iziguli eziningi ziphawula ukuthi ifoni yokubhalisa kokubonisana kwabesifazane ihlale imatasa. Ukufinyelela konke akunakwenzeka, kuyoba ngokushesha. Mayelana nokuqoshwa kwe-elekthronikhi, futhi, konke akuhambisani kahle. Ngokuvamile iphutha lenziwe, abaningi bangakwazi ukusayina ngale ndlela.
- Ukulahlekelwa njalo amakhadi okuphulukisa. Akekho onikeza idokhumenti yezokwelapha ezandleni. Noma kunjalo, abasebenzi basePolitiki baphelelwa ukulahlekelwa amakhadi, bese bebeka icala labo iziguli ngokwabo.
"Umzila ulapha, njengaseMausoleum." Abesifazane abaningi bakhononda ukuthi kumele bahlale imizuzu engamashumi amane ukuze bathole isigqebhezana sokungena. Into edabukisayo yilapho usukuma yonke imigqa, futhi uma okwakhiwa kwakho, amakhuphoni aphela ngokuzumayo. Kodwa awukwazi ukuthatha usuku olungu-1 ngaphambi kokungeniswa.
- Futhi futhi, kodwa kuphela kudokotela. Le yinkinga ebuhlungu kunazo zonke, mhlawumbe kuzo zonke izinhlangano zesigaba sezimali. Abafazi abanayo isikhathi esiningi ebhalweni, ngakho-ke baphendukela ku-gynecologist. Futhi kukhona konke kuxhomeke kudokotela. Omunye wezifo zomzimba angathatha ngokushesha, enye, ngokuphambene, kuze kube yilapho konke kuhlolwe ngokuningiliziwe, ngeke kuvumele ukuhamba. Ngokuvamile kufanele ulinde ihabhinethi ngamahora amabili noma amahora amathathu. Yilokho okushiwo yi-polyclinic yebhajethi!
- Izimo ezimbi. Emibhalweni yokubonisana ingcolile, i-stuffy, indlu yangasese iyabhema kabi, kuyo yonke indawo iyasakaza ama-wet, amathoni asetshenzisiwe. Izihlalo emahhovisi zidala kakhulu. Ngokuvamile, izimo azihle kakhulu.
- Ukuntuleka kokusebenza odokotela. Abesifazane abaningi bayaqaphela ukuthi ababelethayo babhekene nalokhu kuxoxisana. Baphatha lezi ziguli ngokumangalisa, bekhala futhi behlolisisa. Abantu abaningi bathola umbono wokuthi uze ufake ama-ruble amaningana esikhwameni sikadokotela, isimo sakhe sengqondo ngeke sishintshe.
I-Polyclinic 147: eMoscow. Umnyango wezingane
Abafana namantombazane bangena emagatsheni angamanyaka unyaka owodwa:
1. Egatsheni le-1 st ekhelini: pos. Rublyovo, I-Soviet, 2.
2. Egatsha le-5 ku: I-boulevard yaseFovsky, 18.
Amafoni Ama-nursery angu-147 e-polyclinic anezinto ezilandelayo:
- 7 (499) 738-49-49 yinombolo yegatsha 5.
- 7 (499) 145-03-04 - lena inombolo yocingo yomnyango № 1.
I-polyclinic yezingane ezingu-147 ithatha izingane ezineminyaka engu-0 kuya kweyi-15. Odokotela bezingane, odokotela bomsebenzi obaluleke kakhulu lapha: abahlinzayo, ophthalmologists, otolaryngologists, ama-orthopedists, izazi zezinzwa. Lapha, iziguli ezincane zihlolwa, zihlolwe, ukwelashwa okunqunyiwe, izinqubo ezahlukene ze-physiotherapy.
Ukushiwo kwabazali nge-polyclinic yezingane
Umama, oza emkhosini nabantwana bakhe, ikakhulukazi, anelisekile kokubili odokotela kanye nemibandela yalesi sikhungo. Abahlengikazi bonke banakekele, isimo sengqondo sabantwana sihle kakhulu. Emahhovisi kukhona amathoyizi, ukuze izingane ziphazamiseke ngenkathi zisetshenziselwa (isilinganiso sokuphakama, isisindo, ukuhlolwa okuphelele kwengane). Emakhanini kukhona amatafula atshintshayo, izitolo eziningi. Konke kuhlanzekile futhi kuhloniphekile. Endaweni yangasese, iphunga elimnandi, kunephepha, kodwa-ke, amanzi asempompini ahlale ebanda.
Ehhovisi le-inoculation, ochwepheshe abanobungane basebenza. Bangakwazi ukugqugquzela noma iyiphi i-kid ukuthi ibeke umjovo, uyiqede futhi inikeze isipho esingokomfanekiso. Njengama polyclinics amaningi ezwe, ama-vaccination akwanele. Kodwa uma bevela, abahlengikazi baqala ukukhala futhi bazise ukuthi umgomo ufikile. Ngendlela, ukugoma kukhululekile. Abazali bathanda lesi simo sengqondo sabasebenzi bezokwelapha.
Futhi kule polyclinic yezingane kukhona amakamelo okwelapha lapho enza khona ukwelapha ngokomzimba, i-electrophoresis, izibhuku zokuphalafini, ukubhunga umzimba. Ayikho insizakalo enjalo kwezinye izikhungo zombuso.
Ngokuvamile, ukubuyekezwa kwe-polyclinic yezingane ezingu-147 kulungile. Abazali abaningi bafuna lesi sikhungo sithuthukise ukuchuma, imali eyengeziwe yokuthenga imishini edingekayo.
Lesi sihloko sazi umfundi noMoscow State Polyclinic No. 147. Kodwa-ke, manje lesi sikhungo sihlelwe kabusha. Amagatsha angu-5 akhiwe. Manje igama lenhlangano lihlukile - i-polyclinic No. 195. Naphezu kokuthi lesi sikhungo salungiswa, kwafakwa imishini, abantu abazange bahlale bebukeka kahle. Ngokuvamile kuyisici somuntu esibangela isithombe sonke. Isimo sengqondo sokungaboni kahle kwabasebenzi besifazane abamukelayo, ukungabi namandla, ukungakwazi ukusebenza kwamanye odokotela kunciphisa idumela lesikhungo. Kodwa nokho kukhona iziguli ezijabule ezincoma ukuthi zisebenzise usizo oluhlukahlukene ku-polyclinic № 147.
Imithi yokwelashwa ye-angina pectoris
Ukuzivikela komzimba okuqondile kudala kanjani?
I-hemisphere yesokunxele yobuchopho. Izindawo ezikhethekile. I-hemisphere efanele yobuchopho
Hlaziya wokusebenza wamanje
Obumbene ukukhilosha ingubo futhi ehlonipha amalungelo ayisisekelo
Ubuthi ngesikhathi sokukhulelwa
Gel for izinsini ukuvuvukala nokuqhuma: ukubuyekezwa, amanani, isicelo
Izinsiza - Antivirus PC Guard
"Muni" (namanabukeni), inani
Indlela yokwenza ikhofi - coffee lover izimfihlo
Lesizalo adenomyosis: Izimbangela, Izimpawu, ikakhulukazi ukuphathwa
Amagciwane Polymorphic - kuyini nendlela yokubhekana nazo?
Protivoskripnye ipuleti ukubopha pad: Incazelo
Sofiya Bush: zokuthuthukisa umsebenzi, impilo nokuphila siqu actress